Tattoos-gadaal - Dharka Ragga Stylish | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, fashion
Xaqiiqdii waa mawduuc waxay u warbixisaa abuurista naqshad cabbir weyn, hal-abuur iyo asal ahaan. Noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'tattoos' ayaa lagu abuuray dhabarka taasna waxay siinaysaa awood weyn oo lagu cabbiro sawirka iyada oo aan xaddidnayn, waa mid wax ku ool ah oo sidaas awgeedna loogu talagalay dadka geesinimada leh.
Tattooga ku yaal dhabarka ayaa muujinaya xoog iyo geesinimo, Tan iyo markii la awooday in la sawiro sawiradan baaxada weyn, waqti iyo iska caabin xanuun ayaa loo baahday taasna waxay xoojineysaa dabeecada qofka. Xaqiiqda Tattoo ee qayb kasta oo jirka ka mid ah ma aha oo kaliya a shaqooyinka gurigalaakiin sidoo kale dumarka, oo waxaa jira haween si xor ah u siiya bandhigooda oo aan u arkin wax aan macquul ahayn inay ka mid noqdaan dhabarkooda.
1 Faa'iidooyinka tatuurada dhabarka
2 Dhibaatooyinka tattoo-dhabarka
3 Noocyada tattoo gadaal ah
4 Noocyada Tattoo-ka
Faa'iidooyinka tatuurada dhabarka
Mid ka mid ah faa iidooyinka ugu caansan ee lagu sawiro aaggaan ayaa ah meel ku filan oo la heli karo si loo horumariyo naqshadeyntaada. Dad badan ayaa sameeya tattoo noocan ah markay raaceen dhabbiil dhowr ah oo ka mid ah maqaarkooda. Waxa ugu muhiimsani waa sida caadiga ah in qaar ka mid ah kakanaanta yaraanta hore loo soo saaray oo ay hadda doonayaan inay ka sii adkaato oo qoto dheer tahay.
Qofka mas'uulka ka ah sameynta sawirkaaga iyo sharaxaaddiisa wuxuu lahaan doonaa boos badan iyo hal-abuur, marka laga reebo aragti weyn si loo awoodo in la furo qaybo adag. Qofka tattoo ku yeelan doona dhabarkooda wuxuu awood u yeelan doonaa inuu abuuro qaybo gaar ah oo ay kaliya u baahan yihiin inay muujiyaan xaaladaha gaarka ah.
Mid ka mid ah cilladaha ugu waaweyn ayaa ah in lagu sawiro xariiq weyn qofka ayaa laga yaabaa inuu u yimaado inuu ka qoomamo. Waana in tatuuxu uu yahay mid aad u mug weyn suurtagalnimada ah in la waayo goor dambe ay dib ugu noqon karto dhibaatooyin aad u weyn, ma sahlanaan doonto in la macsalaameeyo.
Isticmaalka khad badan si loo sawiro, qaar baa u arki doona sidii wax dhibaato leh haddii ay u horseedi karto inuu ku dhaco cudurro qaarkood. Maanta wax walaac ah lagama qabin, maaddaama ay khafiifiyadoodu ka madhan yihiin biro culus oo qaarkood u horseeda dhibaatooyin caafimaad sida nooc ka mid ah kansarka. Kaliya waa inaad taqaanaa sida loo doorto goobta iyo waddanka ku sameeya qaab caafimaad leh.
Marka laga hadlayo arrinta xanuunka, dhammaan tattoosku waa xanuun, taasi waa lama huraan. Laakiin waxaan ku soo celin karnaa aaggaas dhabarku waa mid ka mid ah kuwa ugu yar ee xanuunka leh. Qeybaha dhinacyada ama aagga lafdhabarta ayaa ah meelaha ugu nugul xanuunka.
Haddii, sabab kasta ha noqotee, ay ahayd in lagu sameeyo qalliin, waa inaan ka fikirno taas waxay soo bandhigi karaan dhibaatooyinka nabarrada, taasna waxay ka dhigaysaa in sawirku aanu yeelan doonin isla sinnaanshaha bilowgii, maxaa yeelay waxaad yeelan doontaa nabar.
Noocyada tattoo gadaal ah
Waxaa jira xiiso aad u weyn oo ku saabsan farsamada tattoo oo lagu dabaqay dhabarka. Tattoo ee maafiyada Jabbaan ama Yakuza Waa sawiradaas kuwa siiya farshaxanimadaas iyo qiimaha astaamaha noocaas ah ee matalaadda ah. Waxay astaan ​​u yihiin silica iyo haybadda oo wixii ka sarreeya dhammaantood waxay daboolaan dhabarka oo dhan. Markii hore waxaa lagu matali jiray midabka madow, laakiin midabada dambe sida cas, cadaan iyo cagaar ayaa la isku daray. Calaamadaha ugu badan ee la isticmaalo badanaa waa samurai, geishas, ​​xayawaanka sida masduulaaga, masaska, shabeellada ama kalluunka Koi; ubaxyada cherry ayaa sidoo kale badanaa la sawiray. Dhammaan waxyaalahan waxay leeyihiin macno gaar ah oo waafaqsan qaabkooda.
Mafia Jabbaan ama Tattoos-ka Yakuza
Tattoo qabyaaladeed Waxay aad uga wakiil yihiin dhaqankeenna, in kasta oo magacoodu ka yimid dhaqammada ka soo jeeda Galbeedka Aasiya iyo Baasifigga. Waxay u taagan tahay muuqaallo ruuxi ah oo intaa ka sii badan sidaa darteed qofka wax ku sawirayaa wuxuu ka dhigayaa inay dareemaan ilaalin badan.
Qaabka loo sawiro sawiradan ma aha inay daboosho dhabarka oo dhan, Waxaa jira iyaga oo matalaya qaybta sare, dhabarka hoose ama muunad yar oo lagu sawiray meel gaar ah. Midkoodna waxay ka imaan kartaa dabeecad kale waxayna badanaa koobtaa tiro aan xad lahayn oo soo jeedinno ah.
Nidaamyada loo yaqaan 'tattoos' laga bilaabo bidix ilaa midig: tattoo gothic, biyo-biyood, iskuul hore iyo xaraf
Waxaa jira noocyo badan oo kaladuwan iyo dhadhamin heer sare ah. Waxay kuxirantahay dhaqanka, shakhsiyadda qofka ama waaya-aragnimadooda nololeed, Tattoo-ga waxaa maqaarka ugu gudbin kara astaamo kala duwan.
Tattoo-ga dhabta ah: waa sida magaceedu sheegayo, mid dhab ah. Waxay noqon kartaa matalaad kufilan sawir ama muuqaal shaqsiyadeed, xayawaan, rinjiyeyn ...
Tattooga nooca loo yaqaan 'graffiti': Sawir gacmeedka noocan ah wuxuu na xusuusin doonaa farsamooyinka ay adeegsadaan farshaxanno farshaxanno ah, oo leh midabbo dhalaalaya iyo qaabab buunbuunin ah, oo leh taabasho dhallinyaro oo moodada ah.
Tattoo gothic ah: waa sawir siiya dareenka mugdiga, waa mugdi iyo midabbo mugdi ah. Marar badan oo madaxyo ah ayaa badanaa matala.
Tattoo-biyo-biyoodka: sawirradiisu waxay u taagan yihiin qaababka iyo midabada dib loogu soo celshay halabuur biyo-biyood ah. Farsamadiisa ayaa aad uga duwan taatikada kale iyo walxaha dabiiciga ah waxaa loo isticmaalaa midabyo dhalaalaya.
Tattoo-kii Dugsiga Hore ama tattoo dhaqameed: Dhamaadkeedu waa mid dhaqameed, waa mid adag, nadiif ah oo fudud. Waxaa lagu gartaa maxaa yeelay jidadkeeda waxaa lagu qeexaa xariiq aad u dhumuc weyn midabkiisuna wuxuu u dhexeeyaa casaan, cagaar, jaalle, bunni iyo wax kale oo yar. Noocyadeeda wakiillada ugu badan waa ubaxyo, xayawaanno, badmaaxiinno, soojiidasho, dagaal jecel, qalbiyo, waraaqo ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Tattoos dhabarka
6-da feeryahan ee ugu caansan taariikhda